Ka hadal xabadka pachinko dagaalka
トップページ ＞ 言語 ＞ ソマリ語 ＞ Ka hadal xabadka pachinko dagaalka
pachinko Old yahay, dadka qaar in play wanaagsan ahaa fudud xitaa aan wax badan maalgelinta. Pachinko Recent waa, khamaarka waa mid aad u xoog badan, diyaar u yahay inuu baaba'aan in ka yar 30 daqiiqo 10,000 oo yen.
maxaa yeelay, Waa pachinko noocan oo kale ah, haddii aad Mawaso doonaa 1000, wuxuu noqon doonaa keeni maalgashiga jiro waqti 50,000 oo yen. Si aad u ciyaaro mid ka mid ah maalin ee aan ilaa xad ku dhacay, waa in ay noqotaa boqolaal kun oo lagama maarmaan ah. Sidaa darteed
, waxa uu noqonayaa mid aad u noqon doontaa iibinta ee xabadka dagaalka. Oh ee dadka doonaya inay ku guuleysato
, marna i dhaawaceysaa inaan military Shinkin waa badan. Recently, waxaa sidoo kale waa model si adag mawjadihii, u janjeera in xoog in ay qaataan waqti dheer si joojinta itimaalka, hore xitaa taagan wanaagsan waxa uu ku yaalaa laga yaabaa cabatay samayn aad u baahan tahay si ay u samray. Waa arrin aad u muhiim ah in la diyaariyo kaliya ee xabadka dagaal hodan ah inuu u adkeysan.
dadka doonaya inay ku guuleysato waa wanaagsan at, laakiin yaa ugu Sugan kuwa pachinko ah sida inay ku raaxaystaan ??hiwaayad, xabadka dagaal laga yaabaa in sidoo kale u baahan inuu ka fikiro dhibic kala duwan ee view.
marka aad sidoo kale doonayay in ay si pachinko tago waa, Waxaan u malaynayaa First si loo hubiyo in xabadka dagaalka. xabadka War waa, Sidee wanaagsan haddii oo kaliya ka daqiiqadii aad qabto naftaada, dadka ku noqdo sidii butukha ah maalin kasta, kaliya ma aha doono ku filan.
Sidaas daraaddeed, dadka qiyaas ahaan marka xabadka dagaalka uu lumo, Toka deyn buu igu ahaa ka saaxiib, waa in korodhka ka yimaadaan si ay u ururiyaan xabadka dagaalka iyo deynta ah in qof ayaa ku dhow inay degree ah in deyn buu igu ahaa ka lover ah. Marka deynta celi si dadka yaqaan, sidoo kale waxaa jira khatar ah oo ka mid ah xitaa laga badiyay credit, ninna mar dambe i amaahi lacagta.
ama ogaadaan xaaladda noocan oo kale ah, tan iyo wakhtigii jir ah, sida pachinko ee majaladda, laakiin advertising shirkadaha maaliyadeed leeyihiin saaran gaadiid badan, waxaa jira sidoo kale xirfad leh ee farshaxanka, sida ma soo saari gacanta caadi ahaan lahaa. Laakiin hadda, oo ku filan waxaa sidoo kale waa cudur la yiraahdo qabatinka pachinko, pachinko ayaa halaagsameen la khamaar ku tiirsanaanta xoog leh. _x000D _
Intaa waxaa dheer, si ay u kicin xabadka dagaal sannadihii la soo dhaafay, si ay u dukaameystaan ??la credit card, dadka qaar in ay xaqiiqada ah in badeecada iyo lacag caddaan ah si kor loogu qaado lacagta. Jidka Easy in ay lacag dagaal la sara kicin kara, laakiin, in dhamaadka, ha iloobin xaqiiqada ah waa in lacagta.
ee la soo dhaafay waxaa la soo noqnoqda sabab maalgashiga lumay, sidoo kale meesha qarashka maciishadda, abuuro shirkadaha maaliyadeed xabadka dagaal oo gacanta ku sida a, waxa kale oo aad xaqiiqo ah in dad badan oo in pachinko ah. Gaar ahaan haweenka, ayaa la sheegay in ay fududahay in la dhaco.
pachinko, tan iyo xitaa ma naqaano ka soo baxa ama ka tago, laakiin waa wanaagsan yahay inta badan, haddii ay suurtogal tahay in dareenka play, pachinko dhawaan uu aad u sarreeyo waxaa khamaarka, waxaan leenahay xubno uu noqday xoog inuu ku guuleysto .
, sida in ay jirto in aan ciyaaro haddii kiciyey badan oo xabadka dagaalka, xaaladda ay ku sugan pachinko in ay u keeneen gobolka nafsi ah ayaa noqday dhibaato. Pachinko waa, in si dhexdhexaad ah u ciyaaro, isku day inaad la rumeysan yahay inay ku raaxaystaan ??per a.
dhawaan, waxa uu noqday rukunka badan Dejihane ee Yu Pachi sida pachinko play. Intaa waxaa dheer, maxaa yeelay, faafidda 1 yen pachinko ayaa sare, waxaan u malaynayaa in ay noqon doonto isku dayi karaa in uu ku raaxeysto oo aan ku xidhnaa in fikradda ah guul.
xabadka dagaal aan macquul ahayn ururiyay ka dhigi lahaa ayaa sidoo kale aad u waalan nolosha. maalgelin aan macquul ahayn ma aha, haddii mowqifka ee play Marka aad xabadka dagaal, waxaan u malaynayaa in ay la riyaaqay lahaa dheeraad ah oo caafimaad qaba. aad noocan oo kale ah. Gaar ahaan haweenka, ayaa la sheegay in ay fududahay in la dhaco.
xabadka dagaal aan macquul ahayn ururiyay ka dhigi lahaa ayaa sidoo kale aad u waalan nolosha. maalgelin aan macquul ahayn ma aha, haddii mowqifka ee play Marka aad xabadka dagaal, waxaan u malaynayaa in ay la riyaaqay lahaa dheeraad ah oo caafimaad qaba.